နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: တစ်ခါက ငယ်သူငယ်ချင်းဆီသို့...။ Kanpai
တစ်ခါတုန်းက အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် ပြောပြဖူးတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း သုံးယောက် အကြောင်း။
မောင်ယာမာမိုတို၊ မောင်တာကာရှိနဲ့ မမိုမိုကို လို့ပဲ လွယ်လွယ် နာမည် ပေးလိုက်ပါစို့။
သူတို့ တစ်တွေရဲ့ ငယ်ဘ၀ဟာ မိခင်ဖခင်မဲ့ အနေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အလွန်ချစ်ကြသတဲ့။ တစ်ဦးက ဒုက္ခရောက်ရင် ကျန်တစ်ဦးက ဖေးမကူညီကြတယ်။ မိတစ်ဆိုး၊ ဖတစ်ဆိုးလေးတွေဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်။ နားလည်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့တတွေ အရွယ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ယာမာမိုတိုနဲ့ တကာရှိတို့ဟာ အခြေအနေကြောင့် ယာကူဆာ မာဖီးယား ဂိုဏ်းဝင်တွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ယာမာမိုတိုအနေနဲ့ ဒီအလုပ်ကို မပျော်ပိုက်ကြောင်း၊ ဒီအဖွဲ့ကနေ ထွက်ဖို့ အမြဲကြံစည်နေတယ်။ တာကာရှိကို လဲ တိုင်ပင်တယ်။ သို့သော်ငြားလဲ တာကာရှိက ဂိုဏ်းရဲ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကို နားလည်ထားတော့ ဒီအတိုင်းထွက်လို့ မရဘူး။ အသေထွက်မှ ထွက်လို့ရတယ် ဆိုတာကို ယာမာမိုတိုကို ပြောပြတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သေမှပဲ ယာကူဆာဂိုဏ်းကနေ ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့။
မိုမိုကိုကလဲ အရွယ်ရောက်တော့ ချစ်ကြည်နူးစရာ နှင်းဆီငုံလေးလို အလှတရားတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်း ကြိုက်တဲ့ ပျိုပျိုမေ ဖြစ်နေတယ်။ ယာမာမိုတို နဲ့ တာကာရှိကလဲ မိုမိုကို ကို ငယ်ငယ်က ဖြူစင်တဲ့ သူငယ်ချင်း အချစ်နဲ့ ချစ်လာရာကနေ အသက်အရွယ်ကလေး ရလာတော့ အရောင်အသွေး စွန်းပေတဲ့ ၁၅၀၀ မေတ္တာနဲ့ တိတ်တခိုး ချစ်မိကြသတဲ့။
တာကာရှီကတော့ စိတ်ကြမ်း ကိုယ်ကြမ်းသမားဆိုတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သာမာန်ဂိုဏ်းသား အဆင့်ကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်းရာထူးကြီးတွေ ပိုင်လာတယ်။ တစ်ရက်သားမယ် ယာမာမိုတိုက မိုမိုကို ကို ချစ်နေမိတဲ့ အကြောင်း၊ ဖွင့်ပြောဖို့ အတွက် သူငယ်ချင်း တာကာရှိနဲ့ လာတိုင်ပင်တယ်။ တာကာရှိခမျာ တစ်ဘက်က ချစ်ရသူ၊ နောက်တစ်ဘက် ငယ်ငယ်ကတည်းက သူ့အတွက် အနစ်နာခံ ပေါင်းလာပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ နောက်ပြီး မိုမိုကိုကလဲ မဆွတ်ခင်က တာကာရှိ အပေါ် ညွှတ်ချင်နေသူ၊ သို့သော် သူက စိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်းဆိုတော့ မိုမိုကို သူ့ဒဏ်တွေ ခံနိုင် မခံနိုင်၊ အစရှိတဲ့ ၀ိရောဓိတွေ ကြားထဲမှာ ခေါင်းခဲနေခဲ့တယ်။
ယာကူဆာ ဂိုဏ်းမှာ အဆင့် တစ်ဆင့် ပြီး တစ်ဆင့် တက်သွားရင် တက်တူးတွေ ထိုးရတယ်။ အဲဒီတက်တူးတွေ ကြည့်ပြီး ဘယ်သူက ဘယ်အဆင့် ဆိုတာ သိတယ်။ အခု တာကာရှိက ၀မ်းဗိုက်ကနေ ထိုးလာတာ ရင်ဘတ် ရောက်နေပြီ။ လက်မောင်းမှာပဲ ထိုးဖို့ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒီနေရာက ဘော့စ်ရဲ့ လူယုံ ညာလက်ရုံး ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး နေရာပေါ့။ သူ့ကို ဘော့စ်ကလဲ သားအရင်း တစ်ယောက်လို ချစ်နေပြီ။ သူ့ကိုတောင် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် အဖြစ် မြောက်ပေးဖို့ အထိ ဘော့စ်က စကားဦး သန်းထားတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ယာမာမိုတိုနဲ့ မိုမိုကိုတို့ သမီးရည်းစား နှစ်ယောက် ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားတာကို မာဖီးယားဂိုဏ်းသားတွေ သိသွားပြီး အပြစ်ပေးဖို့ ဘော့စ်ရှေ့ရောက်လာတယ်။
တာကာရှိခများ အချုပ်အနှောင်ခံနေရတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို မြင်ရပြီး ရင်ထု မနာ ဖြစ်တာပေါ့လေ...။ သူ့ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် လွှတ်မြောက်အောင် သူဘယ်လို ကြံဆောင်ရမလဲ...။ နောက်ဆုံးတော့ သူကိုယ်တိုင် ဘော့စ်ကို သွား အကျပ်ကိုင်တော့တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ထွက်ပြေးခွင့်ပေးပါ။ မပေးရင် သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေပါ့မယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်တော့တယ်။ သားအရင်းလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒုတိယ ညာလက်ရုံးရဲ့ ခံစားချက်ကို သဘောပေါက်တဲ့ ဘော့စ်ဟာ ဂိုဏ်းစည်းကမ်းကို ဖေါက်လိုက်ရတယ်။ ၂၄ နာရီအတွင်း ထွက်ပြေးခွင့်ပေးမယ်။ လွှတ်အောင် မပြေးနိုင်ရင် အဲဒီ နှစ်ယောက်ကို တာကာရှိကပဲ တာဝန်ယူ သုတ်သင်ရမယ် လို့ အမိန့်ချလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ချစ်သူ နှစ်ယေက်အတွက် ထွက်ပြေးရမယ့် ရက်ကို ရောက်လာတယ်။ တာကာရှိကို လာနှုတ်ဆက်ချင်ပေမယ့် တာကာရှိ အတွေ့မခံဘူး...။ ဘော့စ်ကလဲ သူ့လူတွေ အကုန်လုံးကို ဖြန့်ကျက်ပြီး လူစုခွဲထားခိုင်းတယ်။
တာကာရှိတစ်ယောက် အခန်းတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေပြီး သူတို့ သုံးယောက် ငယ်ငယ်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး ဆာကေး သောက်နေတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ဘာအကြောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ အဆက်အသွယ် မလုပ်ဖို့၊ သူတို့တစ်တွေ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြောင်းနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း၊ သက်သက်သာသာ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သိရအောင် ရောက်ရာ အရပ်တိုင်းကနေ သူ့ဆီကို တစ်နှစ်တစ်ခါ ပိုစ့်ကဒ်တွေ မှန်မှန်ပို့ပေးဖို့ပဲ မှာလိုက်တယ်။ အခုအချိန်လောက်ဆို ချစ်သော သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဘေးလွှတ်ရာကို ရောက်လောက်ပြီ ဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ လက်ထဲက ဆာကေးခွက်ကို မိုးပေါ်မြှောက်ပြီး ကောင်းချီး ပေးလိုက်ပါတယ်...။
အဲဒီအချိန်မှာ Nagabuchi Tsuyoshi 長渕 長渕剛 ရေးတဲ့ Kanpai ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို နောက်ခံ သီချင်း အဖြစ် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဖွင့်ပေးထားတယ်...။ ရုပ်ရှင်ကြည့်မိရင်တော့ စိတ်မခိုင်သူများ ခဏခဏ ငိုရတဲ့ ကားလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မကြည့်ရသေးဘူး။ ဆိုတော့ အပေါ်က ဇာတ်လမ်းက မှန်ချင်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဆင့်ကြား ဖြစ်တဲ့ အတွက် မှားယွင်းနိုင်ပါကြောင်း...။
နားဆင်လိုသူများ အောက်က ယူထုမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
Kanpai (kampai) 乾杯
အရင်တုန်းက တေးသီချင်း ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်က အဆိုတော် ကိုခင်ဝမ်းဆီကို ချဉ်းကပ်ဖူးတယ်။ ကိုခင်ဝမ်းဆိုတာ အဖေဂျပန်၊ အမေ မြန်မာကနေ မွေးလာတဲ့ ဂျပန်မြန်မာ ကပြား တစ်ဦးပါ။ အဲဒီ ထုတ်လုပ်သူက ကိုခင်ဝမ်းရဲ့ အကြောင်းကို သိတော့ အဲဒီ ကန်ပိုင် သီချင်းကို မြန်မာပြုဆိုရင်ဆို၊ မဆိုချင်ရင်လဲ ဂျပန်လို ပြန်ဆိုဖို့ ကမ်းလှမ်းဖူးပါတယ်။ ကိုခင်ဝမ်းကတော့ မူရင်း တေးရေး/တေးဆိုရဲ့ အရှိန်အ၀ါနဲ့ အနုပညာကို သူလိုက်မမှီနိုင်ကြောင်း သီဆိုဖို့ဆိုတာ မုဒ်ကအစ အနုပညာ ဈာန် ကောင်းနေမှ ဖြစ်နိုင်မယ့် အကြောင်း ပြောပြီး ငြင်းလွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းလို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီ သီချင်းကို အဆိုတော် ၀ိုင်ဝိုင်းကနေပြီးတော့ မြန်မာပြု ဆိုထားပါတယ်။ သီချင်းနာမည်က “ဖြေသိမ့်လိုက်” လိ့ အမည်ရပါတယ်။ လူငယ်တွေကြားမှာ အတော်ကို ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းကို အောက်မှာ ဗားရှင်းနှစ်မျိုးနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်မျိုးက MTV ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Live ဗားရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်ခံစားကြပါကုန်...။
၀ိုင်ဝိုင်း “ဖြေသိမ့်လိုက်” MTV ဗားရှင်း
၀ိုင်ဝိုင်း “ဖြေသိမ့်လိုက်” LIVE ဗားရှင်း
ထပ်ဖြည့်။ ။ မနိုင်းနိုင်းစနေမှ တရုတ်ဗားရှင်း တစ်ပုဒ် ပို့လာပါတယ်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မနိုင်းနိုင်း) အရင်က သိရလောက်ကတော့ ဂျပန်မူရင်းလို့သာ သိခဲ့ရာမှ အခုတော့ တရုတ်ဗားရှင်းလဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်း ဒွိဟ ဖြစ်နေပါပြီ။ သိမှီသူများ ပြောပြပါကုန်။ တရုတ်ဗားရှင်းများကို အောက်က ယူထုမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ၀မ်ကျဲ့ ရဲ့ ကန်ပိုင် ဗားရှင်း
အင်္ဂလိပ် ဗားရှင်းတဲ့ အောက်က လင့်ခ်မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
(မကောင်းရင် ကျွန်တော့် အပြစ် မဟုတ်ပါ။ လာရောက်ဝေမျှသူ နိုင်းနိုင်း အပြစ်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။)ဟိဟိ
မနက်၊ နေ့လည်စာ အတွက် မုန့်ဟင်းခါး အိုးကြီး။
Labels: Emotions, Japan, song
ဝက်ဝံလေး May 10, 2009 at 3:43 PM
ဟေး တို့အရင် comment ပေးခဲ့တယ်နော်
သူက ကြိုးကြာနဲ့ ရသွားပြီဆို သယ်ရင်းတွေက အဲလိုပြောတယ် သိလား
တာ့တာ လည်လည်သွားလိုက်ဦးမယ် သူများတွေ ဆီကို
khin oo may May 10, 2009 at 3:51 PM
10 May 09, 15:42
myo: ခုမုန့်ဟင်းခါးထပ်စားနေတယ် လက်ဖက်ကို ဂျင်းနဲ့ ရောနှပ်ပြီးတော့ ပုံစားတယ် ကော်ဖီသောက်မယ်
10 May 09, 15:40
myo: သူများ မုန့်ဟင်းခါးစားတယ်လို့ပြောတော့မှ တင်ဖို့သတိရပြီးတော့
myo: ဘလော့ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှ ရိုက်ပြီးတင်ပါလား
Boyz: စားပြီးမှ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတ်ရလို့ဟေ့.. တို့များက လက်ဆုပ်လက်ကိုင် သက်သေပြနိုင်တယ်။ ချို့ချို့တွေလို လေနဲ့ ချက်တာ မဟုတ်ဘူး...။
10 May 09, 15:39
myo: အဆာပလာတွေလည်း ဖရိုဖရဲ သံပုရာသီးတွေကလည်း ညှစ်ပြီးသားတွေရော
10 May 09, 15:38
myo: ဟင်းရည်ထည့်တဲ့အိုးက ရေပုံးကြီးနဲ့တူတယ်
10 May 09, 15:37
ုkom: မုန့်ဟင်းခါးအိုးကြီးကတော့ အားရသကွယ်။ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ရှုစားသွားတယ်။
ုkom: အဟား မျိူးရယ် သနားပါတယ။် အစ်မက ပြီးတောင်ပြိးသွားပြိ နားထောင်လို့။
myo: မုန့်ဟင်းခါးကလည်း သူများစားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် မပြဘူး
myo: ခုမှ ဖွင့်တယ် လည်နေတုန်းပဲ စိတ်ညစ်တယ်
10 May 09, 15:33
ုkom: အဲဒီမှာမှ ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ live version ကိုပိုကြိုက်ပါတယ။်
နိုင်းနိုင်းစနေ May 10, 2009 at 3:58 PM
ဂျပန်က မူရင်းလားတော့ မသိဘူး....
ဒါက တရုတ်အဆိုတော် 姜育恒 ရဲ့ ဗားရှင်းပေါ့နော်
姜育恒 ရဲ့ အသံက အေးအေးလေးနဲ့ နားထဲစွဲစေပါတယ်
跟往事干杯 တဲ့...း)
Ko Boyz May 10, 2009 at 4:16 PM
ငှက်ကလေး - မင်္ဂလာပါ။ ပြောတဲ့ အတိုင်းသာ မှန်နေရင်တော့ ၀ိုင်ဝိုင်းတစ်ယောက် လူပျိုသိုးကြီး ဘ၀က လွတ်သွားပြီး ဦးရဲ့သမီး ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေနေပြီပေါ့။ ဒါဆို ကိုခင်မောင်သန့်ကို ယောက္ခမကြီးလို့ ခေါ်ရမလားမသိ။ ရီနေရတယ်...။
အန်တီဂွိ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ - တရုတ်ဗားရှင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပို့စ်မှာပါ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။ စုံသွားတာပေါ့။
နိုင်းနိုင်းစနေ May 10, 2009 at 4:26 PM
ဒါက အဆွေးဘုရင် အဆိုတော် 王杰 ရဲ့ ဗာရှင်းပေါ့နော်
ဒါက 姜育恆 ရဲ့ live
သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက ဟိုးတစ်ခေတ် နာမည်ကြီးတွေပဲ...
အသံကိုနားထောင်ကြည့်တာနဲ့ ဘာကြောင့် နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါး) အဖေတို့ခေတ်က သီချင်းပေမယ့် ခုထိ ရိုးမသွားဘူး
ဇနိ May 10, 2009 at 5:09 PM
ကိုဘွိုက်ဇ် မနေ့က သီချင်းရော ဒီနေ့သီချင်းပါ နားထောင်သွားပါတယ်။ စားစရာလည်း ငမ်းသွားတယ်။ မဇနိ
Bino May 10, 2009 at 5:44 PM
I had been heard and listened in Nanjiang, Shanghai and houngkong before
၀ိုင်ဝိုင်း “ဖြေသိမ့်လိုက်” LIVE ဗားရှင်း.
၀ိုင်ဝိုင်း's song also very good.
Now I can listen to the Kanpai (kampai) 乾杯' song.
I don't like Myanmar traditionalုမုန့်ဟင်းခါး coz
khin oo may May 10, 2009 at 5:51 PM
ခင်ဝမ်းရဲ့ တစိတ်ဒေသ ကိုပါ ဖတ်သွားတယ။်
khin oo may May 10, 2009 at 5:53 PM
version စုံသွားပြီ။ ကျေးဇူး..ဘာလဲလို့တော့မေးနဲ့။
ကိုလူထွေး May 10, 2009 at 6:04 PM
ဂျပန်ကားတွေက တရုတ်ကားတွေလောက် ကမ္ဘာမကျော်ပေမယ့် သူတို့ ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေက အင်မတန် အနုပညာမြောက်တယ်ဗျ... ကျွန်တော်လဲ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ စိတ်ထဲစွဲခဲ့တဲ့ ဂျပန်ကားတွေ ရှိတယ်ဗျ...
ကချေသည်ရဲ့သား ကောင်လေးတစ်ယောက်က မွေးစားမိဘတွေဆီမှာ သွားနေခဲ့ရပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းကြာလို့အမေရင်းဆီပြန်လိုက်ရတော့မယ့် အခန်းကို ရိုက်ပြတာဆိုလဲ မျက်ရည်ကျရတယ်... သူတို့ ရဲ့ မွေးစားသားလေးက နေကြာစေ့ကြိုက်တတ်လို့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးက ထမင်းဗူးနဲ့ တစ်ဗူး နေကြာစေ့တွေ ခွာပြီး လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာကို မှတ်မိနေသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာကားတွေမှာလဲ ကားကောင်းတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာ... အနုပညာကို ဖန်တီးဖို့စက်ပစ္စည်ကောင်းတွေ ကင်မရာအသစ်တွေ မလိုပါဘူး.. အနုပညာပဲလိုတာပါ...
ကိုလူထွေး May 10, 2009 at 6:05 PM
ksanchaung May 10, 2009 at 6:17 PM
အနုပညာကို ဖန်တီးဖို့စက်ပစ္စည်ကောင်းတွေ ကင်မရာအသစ်တွေ မလိုပါဘူး.. အနုပညာပဲလိုတာပါ... ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံယူချက်ကလည်း သူ ... သူပြောတဲ့အတိုင်း ပါပဲဗျာ။
Thet Su May 10, 2009 at 10:54 PM
ကိုဘွိုင်းဇ်...ကျနော် ရှာဖွေဖတ်ကြည့်သလောက်...Nagabuchi Tsuyoshiရဲ့ ယာကူဆာ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ Kanpaiကို ဇာတ်ဝင်သီချင်း သုံးထားတယ်လို့ ပြောထားတာ မရှိဘူး။ယာကူဆာကို ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတဲ့ ကားတွေတော့ အများကြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့သူမို့...သူကားတွေ အကုန်လိုက် မကြည့်ရသေးဘူး။
တရုတ်ဗားရှင်းက ဘယ်နှစ်ခုနှစ်က ဆိုခဲ့တယ်သိရရင် ကောင်းမယ်။၁၉၈၀ခုနှစ်မှာ Kanpaiဆိုတဲ့ အယ်လမ်ဘမ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်သီချင်း အနေနဲ့ စပြီး ဆိုခဲ့ပေမဲ့ နောင်၈နှစ်အကြာ ၁၉၈၈မှာ arrangeနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တာက အခုဗားရှင်းလို့ဆိုပါတယ်။
Ko Boyz May 10, 2009 at 11:03 PM
သက်စု - ကိုဘွိုင်းတို့ ၆-၇ တန်းလောက်တုန်းက မြို့မှာ သဘောင်္သား တစ်ယောက် ရှိတယ်။ ကုန်းပေါ်ပြန်တက်ချိန်မှာ သူက အဲလိုပဲ ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်လေးတွေ လာလာပြောတတ်တယ်။ သူပြောတဲ့ အထဲမှာ ဒီသီချင်းကို သူကြိုက်လို့ ဆိုတာတွေ ရုပ်ရှင်ထဲပါတာတွေ ပြောပြတယ်။ ဂျပန်လို့တော့ ပြောတာပဲ။ သက်စုပြောသလိုပဲ လိုက်ရှာလဲ မတွေ့ဘူး...။ ဟုတ်ချင်မှလဲ ဟုတ်မယ်... မဟုတ်ရင်လဲ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာ...။
ဒါပေမဲ့ သူပြောတဲ့ထဲမှာ ကိုဘွိုင်းတို့ တော်တော်မျောသွားပြီး အဲဒီ တာကာရှိကို သနားနေခဲ့တာတော့ မှတ်မိသေးတယ်။
(ဇာတ်လမ်းပြောပြတဲ့ သဘောင်္သား အစ်ကိုကတော့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး...။)
တရုတ်ဗားရှင်းရှိတယ်ဆိုတာလဲ နိုင်းနိုင်းက လာပေးမှ သိတော့တာ။ မူရင်းကို ဂျပန်လို့ပဲ ထင်နေတာ။
သို့ပေမယ့် သီချင်း စာသားနဲ့ သံစဉ် ရွတ်ဆိုမှုမှာတော့ ဂျပန်သီချင်းက flow အတိုင်း smooth ဖြစ်သလိုပဲ...။
တရုတ်သီချင်းမှာ စာသား မပြေပြစ်မှုတွေ တွေ့နေသလိုပဲ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ... ထောင့်ထောင့်ကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့။
Thet Su May 11, 2009 at 12:35 AM
ဂလို...ကဘွတ်ဇ်ရဲ့...အဲဒီ Nagabuchi Tsuyoshiကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကို မကြည့်ရသေးပေမဲ့ ၀ီကီကနေ plotတွေ ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ...ခုနက ပြောသလို သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ဆိုတာကို မတွေ့ရတာ။တခြားသူတွေ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ယာကူဆာကားတွေမှာ သုံးရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။တကယ်လို့ ကိုဘွိုင်းဇ်ပြောတဲ့ နာမည်တွေ တာကာရှိပဲဆိုပါစို့က ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်ရဲ့ နာမည် အမှန်သာဆိုရင် Nagabuchi Tsuyoshiသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ ဇာတ်ကောင်နာမည် တာကာရှိ မပါဘူးဗျ။ဒါကြောင့် အဲဒါသည် လန်ကြုတ်ဇာတ်လမ်းလို့ ကျနော်က ခုချိန်ထိ ယူဆတုန်းပဲ။ ဂျပန်သီချင်းက ၁၉၈၀ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတယ်တဲ့။အဲဒီနောက်မှ တရုတ်သီချင်းကို ဆိုတာဆိုရင် မူရင်းက ဂျပန်ပေါ့။
အိုက်ခီလောက် May 11, 2009 at 3:00 AM
အယ် ဘာမှဝင်မပြောတော့ဘူး အသာလေးသီချင်းနားထောင်ပြီး
Ko Boyz May 11, 2009 at 9:19 AM
ကိုဘွိုင်းလဲ ကြားဖူးတာကို ပြောပြတယ်လို့ အစချီထားတယ်လေ။
ခုထိ အဲဒီ ရုပ်ရှင်ကို ရှာကြည့်တာတောင် မတွေ့ဘူး။
သူငယ်နှပ်စားမို့ အနှပ်ခံလိုက်ရတာလား မသိဘူး။
ဒါပေမဲ့ သူပြောတာလေးတော့ လွမ်းစရာ အကောင်းသား။
ခုထိ တာကာရှိကို နောက်ဆုံးခန်းမှာ တစ်ယောက်တည်း အရက်ခွက်ကိုင်ပြီး ကမ်ပိန်လုပ်နေတဲ့ အခန်းကို မှတ်မိနေတာ။
သူကတောင် အဲဒီ ဂျပန်သီချင်းကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဆိုပြီး ဖွင့်ပြနေသေးတာ။
ဒါဆို အဲဒီ အစ်ကိုကြီးကတော့ ပုံပြောကောင်းသူပေါ့...။
(ဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်မှာ။ သူက တစ်ခါတစ်လေ ရွှတ်နောက်နောက် သမားရယ်။)
နိုင်းနိုင်းစနေ May 11, 2009 at 7:11 PM
တရုတ်စာသား မပြေပြစ်ဘူး ထောင့်ထောင့်ကြီးပြောလို့ နှမြောလိုက်တာ
အဓိပ္ပါယ်က အရမ်းကောင်းတယ်လေ... နားထောင်ကျင့်မရှိလို့ ထောင့်နေတာလား မသိဘူး :P
ဂျပန်ကမူရင်းလား၊ တရုတ်က မူရင်းလား အင်တာနက်မှာ ရှာပေးကြည့်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်
အင်္ဂလိပ် ဗားရှင်းကြီး ထွက်လာပါတယ်... သေပြီဆြာ....
အင်္ဂလိပ်ကတော့ တရုတ်သံပေါက်နေလို့ တရုတ်ကြီးဆိုထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ် http://www.516x.com/music/85729.html ဒီမှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်
(ဘွိုင်း ခေါင်းခြောက်အောင် ကုလားဗာရှင်းရှာပေးအုန်းမယ် :P)
သက်ဝေ May 11, 2009 at 8:46 PM
သီချင်းတွေနဲ့ စားစရာတွေနဲ့ တွဲတင်တာ ကောင်းပါဘူးလေ...
သီချင်းတွေကို နားထောင်ရင်း စားစရာတွေက မျက်စပြစ်နေ... စားကလဲ စားချင်... စားလို့ကလဲမရ... သီချင်းတွေကလဲ နားထောင်လို့ မပြီးသေး...
Ko Boyz May 11, 2009 at 8:50 PM
မြန်မာကော်ပီသီချင်းတွေမှာ တစ်ခါတစ်လေ စာသားတွေ လိုက်လိုက်ဆိုရတာ ထောင့်တယ်လေ။
တောင်ကြီးမောက်မယ် သနပ်ခါး ကြည့်ပါလား။
အစဦးဆုံး ထွက်လာတဲ့ ကြော်ငြာ .. ဟက်ကက်တို့နဲ့ မော်ဒယ်လေးယောက်လား မသိဘူး... ကပြီးတော့ သီချင်းအလိုက် ဆိုနေတာလေ...။
“တောင်ကြီးမောက်မယ် ရှားလာလားလာ့လား.. သင်မှန်မှန်လိမ်ပါကွယ်” လို့ ကြားရတယ်။
မှန်မှန်လိမ်းပါလို့ ဆိုရမယ့် နေရာမှာ မှန်မှန်လိမ်ပါ လို့ လူတိုင်းက သတိထားမိတယ်။ သံစဉ်အရ “လိမ်း” ဆိုတဲ့ အသံထွက်အောင် ဘယ်လိုမှ ဆိုလို့မရတာမျိုး။ ဒါကသံစဉ်က ကန့်သတ်လိုက်လို့ ဆိုလို့မရတာ။
တစ်ခါတစ်လေ ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်အောင် စာသားတွေ ပြွတ်ထည့်လိုက်လို့ မနည်းလိုက်ဆိုရတာတွေလဲ ရှိသေးသဗျား...။
အဆွေးဆရာကြီး ၀မ်ကျဲ့ကို ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ...။
အဓိပ္ပါယ် နားမလည်ပေမဲ့ သူ့သီချင်းတွေနဲ့ ကြီးလာရတာပါ။
ပြောလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။
ပေါင်ချိန်ကားထဲက နောက်ဆုံး ဇာတ်သိမ်းခန်းတိုင်းက သီချင်း ကြည့်ပါလား...။
အဲဒီသီချင်းဆို သိရသလောက် မလေး၊ ဗီယက်နမ်၊ ယိုးဒယား၊ ရှမ်း၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ အကုန်ပြန်ဆိုထားတာ တွေ့တယ်။ ခမာတွေတောင် ဆိုချင်ဆိုမှာ။
သီချင်းလေးတွေ မျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ နိုင်းနိုင်းရေ့။
ကုလားဗားရှင်းရရင်လဲ လက်တို့လိုက်ပါဦး...။ အသုပ်စုံ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ :P
(လောလောဆယ်တော့ ဘယ်သူ မူရင်းလဲဆိုတာ လိုက်ရှာလိုက်ဦးမယ်...။ :D )
Ko Boyz May 11, 2009 at 8:51 PM
အပေါ်က နိုင်းနိုင်းပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းကို ပို့စ်ထဲ ဘယ်လို ထည့်ရမလဲ မသိ ဖြစ်နေတယ်။ ကူညီကြပါဦး...။
Ko Boyz May 11, 2009 at 8:53 PM
သီချင်းကို ဇောင်းပေးပြီး တင်ချင်တာပါ မသက်ဝေရယ်...။
ဘောနပ်စ်ကတော့ မောင်တီဇက်အေဆီက အကျင့်တွေ ကူးလာတာပါ...။
ခက်တာက လူတွေက အစားကို ပိုငမ်းနေကြတယ်။
ကျွန်တော်တောင် ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကို အစားနဲ့ ပါတ်သက်တာ ပေးလိုက်ရမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ...။
နိုင်းနိုင်းနဲ့ သက်စုက ပို့စ်ကို ပြန်တည့်ပေးလိုက်လို့..။ ဟိဟိ
Thet Su May 11, 2009 at 11:00 PM
ဂျပန်က မူရင်းပါခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျက်စိလျှမ်းကြတာလား မသိပေမဲ့ တရုတ်သီချင်းတွေရဲ့ အစပိုင်း ၅စက္ကန့် နဲ့ ၇စက္ကန့် အကြာမှာ
作曲　長渕剛 နောက်တစ်ပုဒ်မှာတော့ 曲詞 Tsuyoshi Nagabuchi ဆိုပြီး သံစဉ် Nagabuchi Tsuyoshiလို့ ရေးထိုးထားပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီသီချင်းက Nagabuchiက သူ့ဇာတိက ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ဂုဏ်ပြုလက်ဖွဲ့တဲ့ အနေနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းပါတဲ့။ နယ်စတိတိရှိုးအသွား ရထားပေါ်မှာ ရေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဘ၀တဆစ်ချိုးပြောင်းတော့မဲ့(ကျောင်းပြီးဘွဲ့ရတာတို့...အိမ်ထောင်ပြုတာတို့...) အဲလိုလူတွေကို အားပေးတဲ့ သီချင်းပါ။အမှန်တရားဟာ လှပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကဘွတ်ဇ်ရဲ့ တာကာရှိ အိမ်မက်ကိုလည်း မဖျက်ဆီးချင်ပါဘူး...ခွိ...ခွိ...
Ko Boyz May 11, 2009 at 11:05 PM
ဟေ့အေး... တွေ့တော့ တွေ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်လိုလဲ မတတ်၊ ဂျပန်လိုလဲ မတတ်တော့ ဘာရေးထားမှန်း မသိတာဟ။
နေဦး.. ပြောပြော မစောနဲ့ဦး၊ နိုင်းနိုင်းက ကုလား သီချင်း ဆွဲထုတ်လာမှ ကုလားသီချင်းက မူရင်း ဖြစ်နေဦးမယ်...။
(ဘော်ပဲ ပြားပြား၊ ဘာပဲပြောပြော ပုံပြောကောင်းတဲ့ သင်္ဘောသီးကြီးကြောင့် သီချင်းက ကိုဘွိုင်း အမြင်မှာ ပိုလှသွားတာပဲ...။ ဆာကေးခွက်ကိုမြှောက်ပြီး ကန်ပေ့လို့ ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ တာကာရှိ....။ ဟဲဟဲ.. မလျှော့သေးဘူး)
Thet Su May 11, 2009 at 11:19 PM
ဟား..ဟား...ကျနော်ဟာ အစတစ်ခုကို ဆွဲထုတ်ပြီး မဟုတ်တဲ့အကြောင်း သက်သေပြရတာကို အလုပ်အဖြစ်နဲ့ လုပ်လာတာ ကဘွတ်ဇ်ရဲ့...ကဲ...ကဲ...ဒီမှာ Kanpaiသီချင်းစာသားကို ဘာသာပြန်သူက ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။မူရင်း ဂျပန်လိုကိုပေါ့နော်...
အတည်ပြောရရင် ကိုဘွိုင်းဇ်...ကျန်စစ်သားနဲ့ မဏိစန္ဒာဇာတ်လမ်းဘာညာ စသည်ဖြင့် ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ(ရှမ်းတွေအပါအ၀င်နော်)က ဇာတ်လမ်းလှလှဆင်ရတာကို အတော်ကြိုက်တာပဲလို့ ကျနော်ကတော့ မြင်လိုက်တယ်။ကျနော်ကလည်း မှားနေတာကြီးကို မြင်ရင် မှားနေမှန်းသိအောင် လှစ်ဟပြချင်လွန်းတတ်တယ်။တခြားနေရာဆို ကျနော် မပြောပါဘူး။ကိုဘွိုင်းဇ်မို့လို့ပါ...
Ko Boyz May 11, 2009 at 11:25 PM
လုပ်ပါ.. လုပ်ပါ... ကြားဖူးတာမို့ မှားချင်မှားနိုင်ပါတယ်လို့ စကားခံထားနေမင့်ဟာ...။
ဒီဇာတ်လမ်းကို တစ်ကယ် ရုပ်ရှင်မရိုက်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဒါရိုက်တာ လုပ်ရိုက်လိုက်တော့မယ်။
ဒါပေမဲ့ တာကာရှိနေရာမှာ နေမလား...။ ယာမာမိုတို နေရာပဲ နေရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတယ်။ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေမှာ လူကြမ်းကို အကယ်ဒမီ ပေးတဲ့ ထုံးစံ ရှိလား။ ရှိရင် တာကာရှိနေရာ ၀င်လုပ်လိုက်မယ်။ ဟဲ..။
ဘာသာပြန်လေး မဆိုးဘူးဟ။ ချောတယ်။ သိုင်းကျူး...။
Thet Su May 12, 2009 at 12:01 AM
Yamamoto Takashiနေရာမှာ နေပေါ့ဗျာ။Yamamotoဆိုတာက Family Name...Takashiဆိုတာက Given Nameနောက်တာပါ အစ်ကိုကြီးရာ...နောက်အခါ ဂျပန်နဲ့ ပက်သက်တာရေးရင် ကျနော် အစဆွဲမထုတ်တော့ပါဘူး...ကဘွတ်ဇ် မောင်ဂလာဆင်မှာပဲ Kanpaiကို ဆိုပေးပါမယ်။ကိုယ့်မင်္ဂလာဆောင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို အဆိုစေချင်ဆုံး သီချင်းမှာရော...သူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကိုယ်က ဆိုအပေးချင်ဆုံး သီချင်းမှာပါ...Kanpaiက နံပါတ်(၁)တဲ့ဗျ။ကျနော်လည်း တော်တော်လိုက်ဖတ်မိလိုက်လို့ ကျေးဇူး
Ko Boyz May 12, 2009 at 12:04 AM
အပေါ်က တရုတ်သီချင်းမှာလဲ ကမ်ပေ့ လုပ်နေတဲ့ ပုံတွေ ရိုက်ပြထားတာ တွေ့တယ်။
သက်စု လာဆိုပေးမယ်ဆိုပဲ။ တစ်ယောက်တော့ အမြန်ရှာလိုက်ဦးမှပါလေ...။
အို.. ကိုဘွိုင်းပဲ ညည်းကို ဆိုပေးမယ်လေ..။ မြန်မြန်သာ စီစဉ်ပေတော့...။ ဟားဟား...။
အာ...............ရဲ...။ (သူ့လို မချိမဆန့်ကို အော်ပေးမှာ...။)
နောက်လဲ အစ လာဆွဲပေးပါ...။ မသိတာတွေ ပိုပို သိတယ်။ ဟဲဟဲ...။
Ko Boyz May 12, 2009 at 12:07 AM
အဲဒီ အစ်ကိုကြီး ပုံပြောကောင်းတယ်နော်...။ (တစ်ကယ်ကို တာကာရှိကို သနားနေတာ...။)
နာမည်ကတော့ တွေ့ကရာ ဂျပန်နာမည်ကို ကိုဘွိုင်းစိတ်ကူးနဲ့ ပြောတာ။
Thet Su May 12, 2009 at 12:35 AM
တကယ်ကောင်းတဲ့ ဂငယ်ကားတွေ အများကြီး။ပျင်းရင် ရှာဖွေကြည့်ကြည့်...တရုတ်သီချင်းတွေကိုတော့ ကူးချတာများပေမဲ့ ဂငယ်သီချင်းတွေကို သိပ်မကူးကြသလိုပဲနော်။၀ိုင်ဝိုင်းလည်း တရုတ်သီချင်းကနေ ကူးတာလား မသိ။ကူးချချင်စရာကောင်းတဲ့ ဂငယ်သီချင်းတွေ ပေါမှပေါ...အမှန်မဟုတ်တဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်း ကဘွတ်ဇ် ဘလော့ဂ်ကနေ ပျံ့တယ်ဆိုတာမျိုးကြီးဖြစ်ရင် တမျိုးတိုးတိုးမို့ပါ